सबैलाई चकित पार्ने आमिर खानका १० रोचक तथ्य ! | KTM Khabar
सबैलाई चकित पार्ने आमिर खानका १० रोचक तथ्य !
२०७४ भदौ २ गते १५:५० मा प्रकाशित
२ भाद्र, एजेन्सी । बलिउड फिल्म क्षेत्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय नायकको रुपमा चिनिन्छन् आमिर खान । आमिर खानलाई मिस्टर पर्फेक्ट्निस्टको नामले पनि चिनिन्छन् । आमिर आफैमा अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गायक र प्रोडक्सन संस्थापक पनि हुन् । आमिरका बाहिर नआएका केही रोचक तथ्य यस्ता छन् ।